Ahoana no hanatsarana ny voambolana? Ny fomba tsara indrindra hitadidy
Ahoana no hanatsarana ny voambolana? Ny fomba tsara indrindra hitadidy ireo teny vaovao
Ahoana no hanatsarana ny voambolana?
Ny mpianatra tsirairay mianatra fiteny vahiny dia manontany ity fanontaniana ity. Misy fomba maro hanatsarana ny voambolana, izay hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity:
1. Mihaino sy mamerimberina ireo teny tianao hotsiahivana
2. Ampiasao ny metatra flash katolika
3. Mamorona fikambanana miaraka amin’ny sary
4. Mahatsiaro ireo fehezan-teny sy andian-teny misy teny vaovao
5. Teny tenenina vaovao
6. Mahatsiaro ny teny vaovao miaraka amin’ireo sinonimony sy antony
7. Fijerena horonantsary sy horonan-tsary amin’ny fiteny ianaranao
Mba hamaliana ny fanontaniana hoe “Ahoana no hanatsarana ny voambolana?” Ilaina ihany koa ny mahatakatra ny endriky ny olona na ny natiora ny fahatsiarovanao. Ho an’ny olona sasany dia tsara kokoa sy haingana kokoa ny mitadidy teny vaovao amin’ny fihainoana, ny hafa, ny fanoratana sy ny famerenana ny soratra an-tsoratra dia mahomby indrindra. Maro no mahita fa mahomby ny mitadidy ireo teny mampiasa sary na sary. Noho izany, afaka misafidy ny fomba fiasa hanatsarana ny voambolana izay miasa tsara ho anao ianao.
Andao hizaha ny fomba fiasa tsirairay samirery ary diniho ny fitaovana azo atao hahazoana ny fahombiazany:
Maro no mahatsiaro ny teny vaovao tsara indrindra amin’ny fanampian’ny fihainoana matetika.
Afaka mahita rakipeo maro be ianao izay afaka milalao teny vaovao avy amin’ilay fitaovana fianarana anao, fa ahoana kosa raha efa nahare ny antsasaky ny teny tao amin’ilay rakitsoratra ianao, saingy miezaka ny hitadidy ireo teny sisa? Aleo miaiky fa tsy voatery hihaino ny horonam-peo manontolo indray mandeha indray, raha efa nitadidy teny maromaro ianao. Ankoatr’izay, ny isan’ireo famerimberenana sy ny haben’ny fiatoana eo amin’ny teny tsirairay ho an’ny olona tsirairay dia tokony ho olona tsirairay mifototra amin’ny toetoetry ny fahatsiarovanao.
Noho izany antony izany, dia namorona mpilalao audio LingoCard manokana izahay, izay ahafahanao mamafa ireo teny voavolavola rehetra ary hihaino ireo izay tsy fantatrareo. Azonao atao ny manitsy ny isan’ireo famerimberenana ny teny (na ny fandikana azy ireo) ary ny halavan’ny tohatra eo amin’ireo teny eo amin’ny sehatra izay hiasa tsara indrindra ho anao.
Azonao atao ihany koa ny mamorona sy mihaino ny fitaovam-pianaranao avy amin’ny rakitra an-tsoratra rehetra. Ampidiro tsotra fotsiny ny lahatsoratra amin’ny fandikan-teny amin’ny mpihaino ary mihaino.
Ity fomba ity dia mahomby indrindra raha tsy manam-potoana hanaovana fianarana ianareo, satria afaka mihaino ny fitaovam-pianarana amin’ny fotoana rehetra sy na aiza na aiza.
Amin’izao fotoana izao dia misy boky be loatra amin’ny lohahevitra sasany azo alaina. Raha hitadidy teny vaovao ianao, dia azonao atao koa ny manampy azy ireo amin’ny lisitry ny fampiharana ary avy eo mihaino azy ireo amin’ny fampiasana ilay mpilalao.
Ny fomba fiteny malaza indrindra amin’ny fanatsarana ny voambolana dia mamorona karatra flash, izay misy ny lafiny iray amin’ny karatra dia manana teny maharikoriko, ary ny lafiny iray dia manana dikany na fandikana ny teny.
Rehefa avy namorona karatry ny karatra ianao, dia manomboka mijery azy ireo, ary mametraka tsikelikely ireo karatra efa nodinihinao, mandra-pahaizanao ny deck rehetra.
Rehefa afaka volana vitsivitsy taorian’ny fampiasana io fomba io, dia efa nanana karatra zato maromaro aho izay tena nahasorena ny nitondra izany.
Tiako ihany koa ny hanova ny filaharan’ny teny notadidiako, ohatra: alfabeta, albabilià amin’ny alàlan’ny alalana, alalana, amin’ny lohahevitra sy ny sisa.
Noho izany dia nanapa-kevitra ny hampiasa finday smartphone aho saingy tsy nahita fomba tsotra sy azo antoka. Noho izany dia nanana hevitra aho hamorona fampiharana vaovao ho an’ny smartphones, ary roa volana taty aoriana dia namolavola ny fampiharana finday voalohany amin’ny finday LingoCard aho miaraka amin’ny karatra flash sy tahiry iray. Ilaina ny manao karatra amin’ny feon’ireo teny rehetra ary mamorona tahiry maromaro miaraka amin’ny teny ampiasaina indrindra. Nanomboka nifanakalo hevitra momba ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra tamin’ireo mpandraharaha matihanina fantatro aho. Tian’ilay tovolahy ny hevitrao, ary vokatr’izany dia nanomboka nirotsaka tamin’ny tetikasa ireo mpankafy. Taorian ‘ny fanatanterahana hevitra vaovao, nanapa-kevitra izahay fa tsy hitsahatra any ary hanamboatra fitaovana miavaka hafa efa misy eo amin’ ny rafitra roa: Android sy iOS. Nanao fampiharana maimaimpoana izahay ao amin’ny Google Play sy ny Apple Store ho an’ny firenena sy ny firenena rehetra.
Olona maro no manana fahatsiarovan-tena tsara ary ho azy ireo dia afaka mahomby tokoa ny mamorona fikambanana miaraka amin’ny sary maneho. Ohatra, raha mahita takaitra iray ny dikan’ny vahiny izay tsy azonao tsaroanao avy hatrany, dia azonao atao ny maka sary an’io zavatra io ary manorata teny ao amin’ilay fiteny fianarana anao.
Amin’ny fampiharana antsika dia azo atao ny mamorona karatra flash miaraka amin’ny sary avy amin’ny fakantsary na sary avy amin’ny Internet.
Noho izany, raha manana fahatsiarovan-tsaina tsara ianao ary tsy mahatsiaro ny teny sy ny teny sasany, dia azonao atao fotsiny ny manaparitaka ity teny ity ao anaty milina fikarohana ary mandefa sary mety, mametraka izany amin’ny flash-card.
Tena fomba mahomby amin’ny fanatsarana ny voambolana sy fianarana fiteny vahiny. Noho izany dia tsaroanao avy hatrany ny andian-teny sy fehezanteny. Izany dia ahafahanao mamerina fehezanteny voaomana tsara ao anaty resaka nefa tsy mila mahatsiaro ny teny tsirairay misaraka.
Raha toa ka misy dikany maromaro ny teny izay hianaranao, dia mety hahavokatra io fomba io. Ity matetika dia ohatra amin’ny teny Anglisy, ary mba hahatakarana ny fampiasana teny iray, tsara kokoa ny mitadidy izany amin’ny fehezan-teny iray.
Mihoatra ny 120 000 diksionera samihafa no nangonina tao amin’ny tranokalanay ary manodidina ny antsasany dia misy andian-teny sy fehezanteny.
Ny fandikana matetika sy marina ny teny izay ianaranao dia manampy azy ireo hitadidy tsara azy ireo.
Ity fomba fiasa ity dia tsara ampiasaina rehefa mihaino ny famoahana ny teny miaraka amin’ny famerimberenana manaraka.
Andramo ny manonona azy ireo miaraka amin’ny teny hafa mifandraika na amin’ny fehezanteny.
Nalefanay avokoa ny karatra amin’ny fiteny rehetra miaraka amin’ny fihainoana fihainoana amin’ny fiteny rehetra handrenesana ohatra iray amin’ny fanononana marina.
Rehefa avy nandefa ilay mpilalao audio dia mahomby tokoa ny mamerina ny famoahana ny teny mandritra ny fiatoana, ary noho izany antony izany dia tsara kokoa ny mampitombo ny halavan’ny toaka eo anelanelan’ny teny ao amin’ny menio fantsonan’ny mpilalao.
Ny teknikam-pahaizana tena tsara dia ny mitadidy ireo teny miaraka amin’ny fitovinany mitovy na tsy mitovy amin’ny azy ireo.
Ny ankamaroan’ny olona dia mihevitra amin’ny fanampian’ny fikambanana, ary ny fitadidiana ny fampahalalana vaovao dia mety mahomby amin’ny fifandraisany amin’ny fampiofanana amin’ny teny mitovy na mifanohitra.
Azonao ampiasaina ity teknika ity amin’ny famoronana karatra flash miaraka amin’ny synonyms sy antonyms.
Mamakia diksionera miaraka amin’ny synonyms sy anton-javatra avy amin’ny Internet na tadiavo azy ireny amin’ny fampianarana maro samihafa amin’ny fiteny izay ianaranao. Rehefa avy nanambatra ny fitaovana fampiofanana azonao, dia azonao atao ny mamindra ny rakitra amin’ny rakitra an-tsoratra ary alefa any amin’ny fampiharana. Vokatr’izany, ianao dia hamorona ny tahirin-tsarinao manokana amin’ny karatra flash ho an’ny fitaovam-pampianaranao ary ho azo atao ny mianatra ny fampiasana ny teny rehetra ampiasaina amin’ny fitaovana rehetra.
Ankoatr’izay, karazana karatra maro novolavola tamin’ny synonyms sy antonyms dia efa hita ao amin’ny tahiry.
Noho ny fampiasana io fomba io, dia afaka mitadidy teny vaovao maromaro ianao miaraka amin’ny dikany mitovy na mifanohitra aminy, izay ahafahanao manatsara ny vokatrao amin’ny voambolana.
Ity angamba no fomba mahomby indrindra sy mahomby indrindra amin’ny fanatsarana ny voambolana, izay azo ampiasaina mivantana avy amin’ireo mpandaha-teny.
Fomba lehibe amin’ny fitadidiana ireo teny vaovao avy amin’ny tontolo iainana. Rehefa mianatra fiteny vaovao, dia tena manan-danja tokoa ny mahatakatra ny jamba sy ny idioma izay azo jerena ao anaty horonan-tsary.
Tokony hanapa-kevitra ianao hoe inona no karazana fiteny tianao hianarana. Ohatra, ny Anglisy dia manana fizaràna maro toy ny Anglisy Amerikanina, Anglisy Anglisy, Anglisy Anglisy, sy ny sisa. Mifototra amin’ny karazana fiteny tianao hianarana, mila mifidy horonantsary izay voatifitra ao amin’ny firenena mety ianao.
Jereo ny sarimihetsika voalohany miaraka amin’ny dikanteny ho an’ny fahitana tsaratsara kokoa. Raha mandre teny iray tsy azonao tsaroanao indray ianao dia mila manoratra azy ao anaty rakibolana ary avereno averina any aoriana.
Rehefa mijery sarimihetsika sarotra iray aho dia matetika miato, mandika ary manoratra izany amin’ny fampiharana LingoCard. Avy eo dia mihaino ny teny rehetra ao amin’ny mpilalao aho ary mahatsiaro azy ireo amin’ny fampiasana ireo karatra.
Mba hanamafisana ny fitaovana, ny fotoana manaraka dia afaka mijery ilay sarimihetsika tsy misy dikany ihany – raha toa ka nisafidy horonantsary tena mahaliana ianao, dia tsy hihomehy ny fijerena faharoa.
Vokatr’izany, miaraka amin’ny sarimihetsika tsirairay henoinao, dia mila mamorona karatra vaovao vitsivitsy ianao, satria hampivelatra tsy tapaka ny voambolanao.
Aza hadinoina ny tsy fitoviana; mametraha tanjona iray mba hijerena sarimihetsika iray farafahakeliny amin’ny fiteny iray izay ianaranao, na tsara kokoa aza ny mijery ny sarimihetsika afa-tsy ao amin’ilay fiteny ianaranao ary rehefa afaka kelikely dia hotantaranao ny fiteny vaovao.
Andramo ny fomba rehetra azo atao mba hamaritana hoe iza no tsara indrindra aminao.
Rehefa manapa-kevitra ny safidy ianao ary hahatakatra ny fomba hanatsaranao ny voambolana tsara indrindra, dia mila mahatsiaro ny lohahevitra lehibe momba ny fianarana mahomby:
1. Fitoviana. Mila manao fanazaran-tena isan’andro ianao.
2. Mifidy afa-tsy ny fitaovana mahomby indrindra ho an’ny fiofanana
3. Fantaro ny fotoana tsara indrindra hianarana sy hianatra fitaovana vaovao
4. Diniho ny habetsahan’ny zavatra nodinihina
5. Mametraha tanjona mazava ny habetsaky ny fitaovana hitadidy isan’andro sy ny habetsahana
Ao amin’ny rindrambaiko finday, niezaka nampihatra ny fomba rehetra hanatsarana ny voambolana isika ary amin’izao fotoana izao dia omena amin’ny olona na aiza na aiza manerana izao tontolo izao. Mila mametraka ny fampiharana ao amin’ny smartphone ianao ary misoratra anarana ao amin’ny rafitra mba hamonjy ny teny ao amin’ny server cloud.
Miasa hamorona sehatra iraisam-panabeazana ho an’ny olona avy amin’ny firenena rehetra izahay, izay manome fahafahana hianatra fiteny vahiny ary manana fomba amam-panao manerana izao tontolo izao. Manantena aho fa ny fivoarantsika dia hanatsara kokoa ny fahaizanao mianatra ary hanampy anao hanatsara ny voambolanao.
Andrew Kuzmin 14.06.2018